watchOS - Warka iPhone | Wararka IPhone
watchOS waa magaca nidaamka hawlgalka Apple Watch, tufaaxa casriga tufaaxa ah ee sheeganaya inuu yahay kaamil ku habboon iPhone-ka maalinba maalinta ka dambeysa. Sida iOS, watchOS sidoo kale waxay heshaa cusbooneysiin joogto ah oo hagaajiya astaamaha Apple Watch iyo hagaajinta cilladaha.
watchOS 2, kan ugu fiican Apple Watch
Lagu soo bandhigay WWDC 2015, watchOS 2 Waxay u timid inay si muuqata u hagaajiso astaamaha Apple Watch. Waxyaabaha cusub ee ugu waaweyn, waxaan arki karnaa inay siineyso suurtagalnimada abuurista codsiyo asal ah, suurtagalnimada sameynta qaanad furaha si looga hortago xatooyada, hab cusub oo loogu isticmaalo saacad miis iyadoo la adeegsanayo Apple Watch ama dhinacyo firfircoon oo la beddeli karo.
Soo hel dhamaan maxaa ku cusub watchOS loogu talagalay Apple Watch iyo khiyaanooyinkiisa oo dhan.
Wejiga cusub ee sawirka ayaa hadda ka muuqda watchOS 8 beta 2
by Toni Cortés samee Bilaha 4 .
WWDC21 ee Apple qabatay bishii Juun ee la soo dhaafay, Tim Cook iyo kooxdiisu waxay na tuseen wax cusub ...
by Angel Gonzalez samee Bilaha 5 .
watchOS 8 wuxuu bilaabay inuu ka soo muuqdo WWDC 2021. Warkii ugu horreeyay wuxuu ka yimaadaa Waxqabadka, Tababarka ...
WatchOS 4 sameeysa beta 7.1 oo hadda lagu heli karo laba nooc oo kala duwan
by Angel Gonzalez samee Bilaha 12 .
Dhowr maalmood ka hor waxaan kugu wargalinay bilawga beta 4 ee iOS 14.2 iyada oo aan lahayn war muuqda marka laga reebo kuwa horey ...
Apple wuxuu sii daayaa betas-ka ugu horreeya ee iOS iyo iPadOS 14.2, watchOS 7.1 iyo tvOS 14.2
by Angel Gonzalez samee Sannadka 1 .
Maalin un ka hor Apple waxay go’aansatay inay si rasmi ah u soo saarto noocyada cusub ee iOS, tvOS, watchOS ...
watchOS 7 ayaa kuu oggolaan doonta inaad beddesho ujeeddada Jimicsiga Jimicsiga iyo Joogtada ah
Shalay oo lagu soo bandhigayay "Times Flies" Apple wuxuu ku dhawaaqay in maanta aan lahaan doonno cusbooneysiin la heli karo oo loogu talagalay iOS 14, iPadOS 14, tvOS ...
Gacmo-dhaqashada, oo aad uga muhiimsan sidii ay umuuqan lahayd
by Luis Padilla samee Sannadka 1 .
Apple waxay soo bandhigtay WWDC-tii ugu dambeysay muuqaal cusub oo loogu talagalay Apple Watch iyadoo la cusbooneysiinayo watchOS 7: the…
Watchsmith wuxuu ina tusayaa suurtagalnimada dhibaatooyinka ka jira daawooyinka 'watchOS'
Apple Watch wuxuu ahaa aalad horumar badan sameysay tan iyo markii la bilaabay, walina ...
Apple Watch Hurdada Raadinta Soo socota ee La Ogaaday: Tayada Hurdada, Maareynta Batariga, iwm.
by Toni Cortés samee 2 sano .
Apple Watch Hurdada Raadinta Soo socota ee La Ogaaday: Tayada Hurdada, Maareynta Batariga, iwm. Maanta, 9to5Mac wuxuu ...
Apple waxay horumarisay jimicsiga watchOS 6 iyaga oo ka dhigaya kuwo ka madax banaan iPhone-ka
by Kariim Hmeidan samee 2 sano .
Toddobaadkan waxaan aragnay sida ragga ka socda Cupertino ay u sii daayeen betasyada dadweynaha ee nidaamyada soo socda ee soo socda ee qalabka Apple, ...
Tani waa watchOS cusub ee 6 ee loogu talagalay Apple Watch
by Nacho Aragonés samee 2 sano .
Ka dib markii ay soo bandhigtay tvOS-ka cusub ee 13, Apple waxay soo bandhigtay watchOS 6 cusub oo loogu talagalay Apple Watch-keena oo leh warar ku ...
macOS waxay u adeegsan doontaa Apple Watch nidaam aqoonsi
by Luis Padilla samee 3 sano .
Muddo labo sano ah hadda waxaan u isticmaali karnaa Apple Watch inaan ku furno kal-fadhigayaga macOS baahi la'aan ...